Dr. Jimcaale oo sheegay in dastuurka Puntland iyo shuruucda guddiga doorashada ugu horayn lagu faafin doono gobollada Mudug & Nugaal. – Radio Daljir
Dr. Jimcaale oo sheegay in dastuurka Puntland iyo shuruucda guddiga doorashada ugu horayn lagu faafin doono gobollada Mudug & Nugaal.
Nofeembar 28, 2010 12:00 b 0
Garowe, Nov 28 – Shir lagu qabtay xarunta jaamacada Puntland State, faraceeda Garowe ayaa looga hadlay faafinta dastuurka iyo shuruucda guddiga doorashada ee Puntland. Shirka oo ay soo qaban qaabisay dawlada Puntland loogna talagalay in lagu faafiyo dastuurka Puntland, iyo shuruucda guddiga doorashada.
Dr. Jimcaale, wasiiru dawlada dastuurka & arrimaha federaalka oo ka hadlay shirka ayaa sheegay in qorshaha xukuumadu uu yahay in marka hore dastuurka iyo shuruucda guddiga doorashada lagu faafiyo degmooyinka gobollada Mudug (Galkacyo, Galdogob, Jariiban, Bacaadweyn & Xarfo) & Nugaal (Garowe, Buurtinle, Eyl, Dangoroyo & Godob-jiiraan), kadibna loo gudbiyo gobollada kale ee Puntland.
Xikmada ka dambaysa ayaa ku macneeyey in ay tahay in si tartiib tartiib ah degmooyinka oo dhan loo gaarsiiyo dastuurka, ee aan lagu koobin kuwa ku yaal jidka dheer, bulshada oo dhamina ay afkaarteeda uga dhiibato dastuurka.
Dr. Jimcaale awaxaa uu xusay in ujeedadu faafinta dastuurku ay tahay in marka la gaaro afti u qaadidda dastuurka iyo shuruucda guddiga doorashada ay dadweynuhu ay si waafi ah uga munaaqashoodaan, fikir wanaagsanna ka haystaan shuruucda ay xambaarsan yihiin dastuurka iyo guddiga doorashada, si markaa ay u dhaqan galaan, una noqdaan kuwa ka hirgala Puntland.
Afhayeenka baarlamaanka Puntland Md. C/rashiid M. Xirsi oo isna ka hadlay shirka ayaa soo bandhigay fikir ka duwan kan xukuumada oo ku baaqay in xukuumadu ay culayska saarto qof iyo cod; wax kastana laga horumariyo sidii codayn caam ahi ay gobollada oo dhan uga hirgali lahayd.
Inkasta oo xukuumada iyo baarlamaanku ay ka midaysan yihiin hirgelinta barnaamijka dimuqraadiyaynta, ayaa hadana waxaa muuqata kala duwanaansho fikir oo ku salaysan tubta loo marayo hirgalinta barnaamijka dimuqraadiyaynta ee Puntland.
Xukuumadu waxaad moodaa in ay danaysnayo in si tijaabo ah aftida dadweynaha looga qaado gobollada qaar marka hore, deetana lagu xijiyo gobollada kale; halka baarlamaankuna uu doonayo in gobollada oo dhan isku mar codaynta laga hirgaliyo.
Nuxurka kala duwanaanshaha fikir ee labada dhinac ayaa salka ku haya laba arrimood:
1) Xukuumadu waxaa ay hore u sheegtay in afti caam ah dadweynaha gobollada laga qaadi doono,
2) Waxaa kale oo ay sheegtay in haddii taasi suurtagal noqon weydo, in ergooyin ka kala socda gobolladu ay u codayn doonaan dastuurka.
Hadalka afhayeenka baarlamaanka waxaa laga dheegan karaa in baarlamaanku uu doonayo in, si kastaba ha ahaatee, ay xukuumadu culayska saarto afti caam ah oo gobollada oo dhan ka hirgasha, halka xukuumadu aad moodo in ay u janjeedho in ergooyin matalaya gobolladu ay u codeeyaan dastuurka haddii tan 1-aad ay adkaato, waana taa midda ay ku kala duwan yihiin.
Hirgelinta barnaamijka ayaa waxaa iska kaashanaya jaamacada Puntland State, Garowe, ururka KAALO, iyo xafiiska wasiiru dawlaha dastuurka iyo arrimaha federaalka.
Halkan ka dhegayso hadaladii Dr. Jimcaale & Md. C/rashiid M. Xirsi …
Cutub ka tirsan ciidanka badda ee Puntland oo tababar u xirmay maanta [Taswiir].
Magaalada Ceerigaabo oo uu la soo darsay qabow aan hore loogu arag, saameeyeyna nolosha dadka.